ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကိုယ့်ရှူးကိုယ့်ပတ်”
ကိုပေါသမီးက အဖေတူ သမီးပေါ့။
ကိုပေါရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီး အဖေ့ကို သတိရသွားတယ်။ :-)
ကိုပေါ သမီးလေးက သိပ်တော်တာပဲ
သွက်လက် ချက်ချာပြီး ချစ်စရာကောင်းမယ့် ကလေး လေးပဲ
ပိုစ့်လေးဖတ်ပြီး သဘောကျပြီး ပြုံးမိတယ်
Your daughter is very cute. I never forget about “ပုစိညှောက်ကျယ်”. :D
i agree with Myagreen.
your daughter very adorable. :)
ကိုပေါသမီးလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ၊ သူ့ပုံက တည်တည်ကြည်ကြည်နဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိမဲ့ပုံပဲ။
ကိုပေါတို့သားအဖကိုကြည့်ပြီး ကျမငယ်ငယ်က အဖေနဲ့
နေခဲ့ရတာလေး ပြန်အောက်မေ့မိပါရဲ့။ ကျမလဲ မိဘကိုဇွတ်ပူဆာလေ့ မရှိခဲ့လို့ မိဘတွေချီးကျူးတာ မကြာခဏခံရဖူးခဲ့တယ်။ကျမအဖေလဲ အလွန်အနောက်သန်တာ၊ ကျမကတော့ လူတွေရှေ့ အဖေနောက်ရင် လက်ကိုဆွဲဆိတ်တာပဲ။
ကိုပေါသမီးလေးက ချစ်စရာလေးပဲ။ ကိုပေါနဲ့တော့ သိပ်မတူဘူး အမေတူသမီးထင်တယ်။ အရုပ်တွေကို လိုချင်ပေမယ့် မပူဆာဘူးဆိုတော့ လိမ်လည်းသိပ်လိမ္မာတာပဲ။ ကျွန်မသားနဲ့တော့ ကွာပါ့။ ကျွန်မသားကတော့ အစားမကြွးပဲထားလို့ ရရင်ရမယ် သူလိုတဲ့ကစားစရာကတော့ မ၀ယ်ပေးလို့တော့ ကုန်တိုက်ထဲက ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။
She is very cute & adorable. She has very good personality. Sorry, but it is not like father like daughter.
It is "Like mother like daughter".
အရုပ်ကြိုက်တဲ့သမီးလေး .. သူကိုယ်တိုင်က အရုပ်လေးလိုပါပဲလား..။ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ။
သမီးပုံပဲ မမြင်ဖူးသေးတာလေ.... သမီးလေးရဲ့ပုံက အပေါ်ကလူတွေ ပြောသွားတာ ပြည့်စုံနေပြီ...
ချစ်စရာ နဲ့ ထက်မြက်တဲ့ပုံလေး....။
ကျွန်မလည်း ကျွန်မ အဖေကို သတိရသွားတယ်...။
တဟားဟား အော်ရီနေမိရပြီး မျက်ရည်တွေလည်း လည်လာတယ်။
အဖေတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်မေတ္တာကို ရယ်စရာတွေရဲ့ နောက်မှာ ခံစားလို့ ရတယ်။
သမီးလေးက ထက်မြက်မယ့်ရုပ်လေးလို့ပြောတာ တကယ်ပါဘဲ။ တကယ်အဲဒီပုံလေး ထွက်နေတယ်
နောက်တခါ သမီးလေးက မပူဆာလဲ ၀ယ်ပေးလိုက်ပါဗျာ
ဒီလောက် လိမ္မာတဲ့ သမီးလေးကို...
မတန်းခူး ပြောပြထားလို့ ကိုပေါ်သမီးလေး တော်တဲ့ အကြောင်း ကြားထားပြီး ဒီလို ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေပါ ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ်။ သားသမီး တစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့လည်း Do one thing. Do it better ဆိုသလိုပါပဲလား။
ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ကျွန်တော်လဲ သမီးလေး တစ်ယောက်လောက် လိုချင်သဗျာ။ ခက်ထှာ။
သမီးလေးက..ချစ်စရာလေး.. ( မဒမ်ပေါ နဲ့ တူတာဖြစ်မယ်..)း)
အကိုရေ ချစ်စရာလေး မိဘနဲ့ သားသမီးကြားက သံယောဇဉ်လေးကို ဖတ်ရတော့ ရင်မှာ အတိုင်းမသိ ကြည်နူးမိပါတယ်။ သမီးငယ်လေးက ချစ်စရာလေးပဲ တကယ်ပဲ မဒမ်ပေါနဲ့ တူတယ် ထင်တယ်း)) စတာ အကိုရေ တကယ်တော့ အတည်ပါး) ၀င်နောက်သွားတာပါ အာ ရှုပ်ကုန်ပြီ အဟီးးး
အန်တီတို့ မင်္ဂလာဆောင်ကို မေမေ့ ဗိုက်ထဲကနေ တက်တဲ့သမီးလေး…
ပန်းနုရောင်အသားလေးက မေမေနဲ့ တူသလို မျက်နှာပြည့်ပြည့်လေးက ဖေဖေနဲ့ တူတယ်…
ကိုပေါကို အပြိုင်စာရင်းပြုစုနိုင်တယ်ဆိုကတည်းက ဖေဖေကြီးလို ဖြတ်ထိုးဥာဏ်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနေတာပေါ့…
မေမေလို့ဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့ ထက်ထက်မြက်မြက်ကြိုးစားတော့ အမြဲထိပ်ဆုံးကနော်…
ဖေဖေနဲ့ မေမေရဲ့ကောင်းတာလေးတွေစုထားတဲ့ သမီးလေး မိုးသီရီကောင်းစုလို့အန်တီက နာမည်အသစ်လေးပေးလိုက်ပြီ….
သမီးပို့ စ်လေးတွေ မကြာမကြာရေးပါကိုပေါရေ… ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းလို့ …
I love this post very much.....I do miss my father after reading this post.
ကိုပေါကို နိုင်တဲ့သူ ပေါ်လာပြီပေ့ါ။ :)
ကိုပေါသမီးလေးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ထူးချွန် ထက်မြက် သွက်လက်တဲ့ကလေးပဲ။
ဒီပို့စ်ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။
သားအဖကြားမှာ မပြောရဲ မဆိုရဲ မရှိဘဲ အခုလိုဆက်ဆံရေးရှိတာ သဘောကျမိတယ်။
သမီးလေးက ချစ်စ၇ာလေး...so cute
ကိုပေါတို့ သားအဖရဲ့ ဆက်ဆံရေးပုံစံလေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်.. မြန်မာမိသားစု တော်တော်များများက ခလေးတွေကိုကြောက်စိတ် တွေမသိမသာ သွင်းမိမှန်းမသိသွင်းပေးပီး ထိန်းကျောင်းနေကြတဲ့ ပုံစံတွေပြင်သင့်နေပီ.. ကိုပေါအဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Post တပိုဒ်လောက်တော့ ရေးပါအုံးလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်..
September 3, 2009 at 6:03 AM
ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကလေးလေးပါလားး
သူများတွေ ပြောနေတုန်းက သိပ်မထင်ဘူး..
အဖေနဲ့အမေကို ကျော်တက်မယ့်
ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်ပါစေ..
ပျော်စရာနတ္တိ ကျွန်းပိစိမှာ ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မိသားစုနဲ့ 
သမီးလေးနဲ့နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသ်ိမ်းထားနိုင်ပါစေလို့ ...
Yes Ko Paw. I agree with this.
"ကိုပေါတို့ သားအဖရဲ့ ဆက်ဆံရေးပုံစံလေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်.. မြန်မာမိသားစု တော်တော်များများက ခလေးတွေကိုကြောက်စိတ် တွေမသိမသာ သွင်းမိမှန်းမသိသွင်းပေးပီး ထိန်းကျောင်းနေကြတဲ့ ပုံစံတွေပြင်သင့်နေပီ.. ကိုပေါအဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Post တပိုဒ်လောက်တော့ ရေးပါအုံးလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်.."
ဒီလိုသမီးမျိုးလိုချင်သလို ကိုပေါလို အဖေမျိုးဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားရပါအုံးမယ်။
အမ်မလေး ဘလော့တရက်မရောက်လိုက်တာနဲ့ နောက်ကျသွားပါပကော....
ကိုပေါ သမီးလေးက တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ ...
ဟမ်းးးး သားရှင်မှ လာရောက်နှုတ်ဆက်သွားပါတယ် ရှင်...
ဖေဖေ ငယ်ငယ်ကဆိုရင် ၅၀ ပေးရင် ၅၀ အပြည့်ရတယ် လို့ဘယ်လိုပြောမလဲ? ကိုပေါကတရုတ်စကား မတတ်ဘူးဆို၊ သူသိမှာပဲ၊ သူ့အမေကရော သူ့ကိုဘယ်လို ဆက်ဆံလဲ? ကြောက်ရလား? ကိုပေါလိုပဲ ရင်းနှီးလား? ပြည့်တာကရော ဘယ်သူနဲ့တူတာလဲ?
I think the best post ever in your blog history.
မိဘနဲ့သားသမီးကြားက စာဖွဲ့လို့မကုန်နိုင်မယ့် ကြည်နူးစရာ အဖြစ်လေးတွေနော်။ ကျွန်မငယ်စဉ်ကလဲ အဲလိုစနောက်တတ်တဲ့ ဖေဖေကြောင့် ခဏခဏ ရှက်စိတ်ဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြီတော့ လူပုံအလယ်မှာ တကယ်များ ထလုပ်မလားလို့ပေါ့။
သမီးလေးက ချစ်စရာလေးဗျ။ ချက်ချာတာလည်း ပေါ်လွင်ပါပေ့။ သားအဖတွေ အပြန်အလှန် စနိုင် နောက်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေး ဖန်တီးထားနိုင်တာလည်း ကြားရတာ ကြည်နူးရပါတယ်။
သမီးက ချစ်စရာကောင်းတယ်.. မိသားစုက ပျော်စရာကောင်းသားပဲ...
KP>>your daughter is really cute....